अभिताभको जन्मदिनमा ऐश्वर्याको उपहार
न्यू लेक्सस एलएक्स ५७० एसयूभी, यो आरम दायक मात्र होइन, निकै महँगो पनि हो । यसको बजार मूल्य भारतीय रुपैयाँ साढे २ करोड हाराहारी छ । बलिउड सेलिब्रेटी आफ्नो फिल्मले राम्रो कारोबार गरेमा पनि कार उपहार दिने गर्छन् । जन्मदिन त अझ विशेष अवसर नै भयो । कुरा जन्म दिनकै हो । र, जन्मदिन अमिताभ बच्चनको । बिग बी अमिताभले यसपालि जन्मदिनमा कार उपहार पाए । अक्टुबरमा उनको जन्मदिन थियो । बलिउडका यी महानायकले ७६ औं जन्मदिन मनाएका… पुरा पढौ
कस्तो बन्ला चपली हाइट ३ ?
नेपाली सिनेमा उद्योगमा पनि यतिबेला सिक्वेलको बाढी नै आएको छ । एउटा फिल्म चलेपछि त्यसैको ब्राण्ड प्रयोग गर्दे निर्माता निर्देशकहरु दर्शकहरुलाई हलसम्म तान्ने युक्तिको रुपमा सिरिजमा फिल्म बनाईरहेका छन् । यसैक्रममा करिब ५ बर्ष अगाडी बनेको फिल्म चपली हाईटको पनि सिरिजको रुपमा तेस्रो पार्ट बन्ने भएको छ । सुरुवाती दिनमा बोल्ड दृश्य र कथाबस्तुको कारण केही बिवादमा आएको चपली हाईट ले पैसा भने राम्रोसंग छापेको थियो । सोही अभिलाषामा निर्माता… पुरा पढौ
काहुँ धरहरा महोत्सवमा ६५ हजार दर्शक
जनकल्याण क्लबको आयोजना र फूलबारी क्लबको सहआयोजनामा भएको काहुँ धरहरा महोत्सव सकिएको छ । १० दिनसम्म चलेको काहुँ धरहरा महोत्सव ६५ हजारले हेरेको आयोजकले जनाएको छ । आइतबार महोत्सव समापन समारोहमा गण्डकी प्रदेश सदस्य बिन्दुकुमार थापाले काहुँ क्षेत्रले छिट्टै पर्यटन व्यवसायबाट आर्थिक कारोबार बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । पर्यटकीय विकास र धरहरा निर्माणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पहल गर्ने उनले बताए । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पर्यटकीय… पुरा पढौ
“कन्डम होइन, सेक्स टोय बाँड”
मिस पूर्वाञ्चलको नवौं संस्करण चलिरहेको छ । पुष १४ गते ग्राण्ड फाइलनमा सहभागी हुनुपूर्व आफ्ना प्रतिभाहरू देखाइरहेका छन् । यस क्रममा शनिबार मिस पूर्वाञ्चलका १४ सुन्दरीले ‘पेप्सी मिस ट्यालेन्ट’ मा बलात्कारप्रति तीव्र आक्रोस पोखे । सरकारलाई उनीहरूले ‘कण्डम होइन, सेक्स टोय’ वितरण गर्नका लागि सुझाव दिए । १४ सुन्दरी स्पर्धीमध्येकी एक रुसाली केसीले सरकार यहा एचआइभी बढिरहेको छैन, यहा बलात्कार बढिरहेको छ, त्यसैले कण्डम हैन यहा सेक्स टोय वितरण गर्… पुरा पढौ
पोखराको उधौलीमा साकेला र च्याब्रुङ
पूर्वबाट पोखरा आई बसोबास गर्ने किराँतहरुले शनिबार उधौली मनाए । किराँत सेवा समाज कास्कीले पोखरामा उधौली पर्व मनाउने अवसर मिलाएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचेतक शान्ता चौधरीले आदिवासी जनजातिको पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणका लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताइन् । पूर्वमा बसोबास गर्ने किराँत समुदायले पश्चिम पोखरामा रहेर पनिसंस्कृतिलाई जोगाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरेकोमा धन्यवाद दिइन् । चौधरीले आदिवासी जनजाति पछिल्लो क्रममा रमाइलोमा भुल्ने क्रम बढ््दो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।… पुरा पढौ
भूपी काव्य पुरस्कार तीर्थलाई
कवि तीर्थ श्रेष्ठलाई यसपालिको भूपी काव्य पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । भूपी शेरचनको ८३ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा श्रेष्ठलाई मंगलबार हुने समारोहमा पुरस्कृत गरिनेछ । पुरसकार राशि ५० हजार रुपैयाँ, ताम्रपत्र र दोसल्ला छ । २०१६ सालमा पोखरामा जन्मेर लामो समयदेखि नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा क्रियाशील श्रेष्ठले भूपी शेरचनसँग संगत पनि गरेका थिए । उनै भूपीको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर श्रेष्ठलाई सम्मान गर्न लागिएको समितिका अध्यक्ष शिवशंकर गौचनले बताए । कवि श्रेष्ठले… पुरा पढौ
तामाङ सुन्दरी माघमा छानिने
मिस तामाङ पोखराको चांैथो संस्करण माघ १२ गते हुने भएको छ । बैदाम तामाङ सेवा समाज कास्कीले हरेक वर्ष ल्होसारको अवसरमा मिस तामाङ पोखरा तथा ल्होसार म्युजिकल फेस्टिभल गर्छ । तामाङ समुदायका नारीको अन्तरनिहीत प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको बैदाम तामाङ सेवा समाजका अध्यक्ष ज्याक तामाङले बताए । सहभागीहरुलाई तामाङ भाषा, संस्कृति र संस्कारका विषयमा पनि प्रशिक्षण दिइने भएकाले यो विशुद्ध सांस्कृतिक… पुरा पढौ
आज योमरी पूर्णिमा र उधौली
मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने योमरी पुन्हिः अर्थात् योमरी पूर्णिमा पर्व र उधौली पर्व आज मनाइँदैछ । उपत्यकाको नेवार समुदायले ४०० वर्षअघि उत्तरायण माघ १ गतेदेखि योमरी पूर्णिमाका दिनमा सारेको विश्वास गरिन्छ । जाडोको समयमा चामलको पिठोबाट बनेको परिकार विशेषलाई चाकुसँगै खाने पर्वका रुपमा यो पूर्णिमा मनाउने गरिएको हो । यस दिनलाई ज्यापु दिवसका रुपमा समेत मनाउने गरिन्छ । पहाडी क्षेत्र र अन्यस्थलमा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायले कूलपूजा र गोठपूजा… पुरा पढौ
ढुंगाको काँप फोरेर पनि उम्रन्छ पीपल सिर्जना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन निष्फल यो चर्चित र यथार्थपरक कवितांश शुक्रबार १ युवामा लागू भयो । निम्न वर्गीय परिवारबाट कहाललाग्दो जीवन भोगेका १ युवाले लोभलाग्दो ताजमात्र पाएनन्, केही हदमा जीविका नै परिवर्तन हुन सक्ने रकम र व्यक्तित्व पनि बनाए । यस्ता धुरन्धर युवा हुन रवि ओड । रविले शुक्रबार साँझ भएको चर्चित गायन रियालिटी सो दोस्रो नेपाल आइडल उपाधि जितेका छन् । भारतमा… पुरा पढौ
जयगान : भूतको राज्यमा मान्छेको कथा !
पोखरेलीले शुक्रबार फरक स्वादको नाटक हेरे । चीसो दिनमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पुगेका रंगप्रेमीको मन नाटकको आरम्भमै थप चिसियो । अन्धकार रंगमञ्चमा कुनै भावभूमिका बिनै एकाएक राक्षसहरु पो देखिए । लास रोपेर, लास फुलाएर, फलाउने भूतमार्फत पछिल्लो समय भत्किँदै गएको मानवतामाथि कलाकारले कडोर व्यंग्य प्रस्तुत गरे । गत वर्ष गठन भएको ओथेलो नाटक समूहले यो नाटक मञ्चन गरेको हो । नाटक शनिबार पनि प्रदर्शन हुँदै छ । नाटकमा… पुरा पढौ